Alumina Ceramic Disc - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Alumina Ceramic Disc)
Ukugcizelela Okuphezulu Ukugcizelela I-Ceramic Seal Discs
Amarekhodi aphezulu okugqoka ama-ceramic discs I-Ceramic disc fa noma ibhedi yamanzi, i-diverter yamanzi, isibhamu seshawa ngokuvamile senziwe ngama-alumina angu-95%. Kule nsimu, abantu basebenzise ukuphika okumangalisayo kokugqoka, ukulwa nokulimala, ukuhlukahluka okungafani kwezimo zemvelo, okwamanje, ngobunzima...
I-99% i-alumina ceramic milling disc inokumelana okungavamile kokugqoka kunensimbi eyodwa. Ngenxa yendlela yokukhiqiza umjovo futhi ucindezele, ukusebenza kahle kokukhiqiza kuphakeme kunokwenziwa kwe-CNC ngensimbi yokugaya i-disc. Futhi kulula kakhulu ukuhlangana nomshini wekhofi. Siye sanikeza i-disk yokukhishwa...
I-disc ephezulu yokugqoka i-ceramic disc I-Ceramic dis for ibhecti yamanzi, i-diverter yamanzi, isibhamu seshawa ngokuvamile senziwe ngama-alumina angu-95%. Abantu basebenzisa ukuphika okumangalisayo okugqoka, ukulwa nokushisa, ukuhlukahluka okungafani kwezimo zemvelo ezinzima, okwamanje, ngobunzima obuvelele...
I-Alumina Ceramic Disc ye-Water Purity High
I-Ceramic dis for ibhecti yamanzi, i-diverter yamanzi, isibhamu seshawa ngokuvamile senziwe ngama-alumina angu-95%. Kule nsimu, abantu basebenzisa ukuphika okumangalisayo kokugqoka, ukuvimbela ukubola, ukuhlukahluka okungafani kwezimo zemvelo, okwamanje, ngobunzima obuvelele njengedayimane, uphawu oludlulele kanye...
Ukuze kuhlukaniswe i-stator ye-ceramic ne-ceramic rotor ekufakweni kwamadivayisi ekufakweni, amanye amakhasimende adinga umbala okhethekile walezi discs ze-ceramic seal. Siyakwazi ukukhiqiza i-disc ehlukile yombala ekhethekile we-alumina ceramic yamapompo amanzi, okujwayelekile ukuthi i-pink noma emnyama. Kungani...
Njalo ngonyaka, ama-disc angaphezu kwezigidi ezingu-30 ze-ceramic disk afakwe kwi-mixer eyodwa-handle mix handle, ukuxuba i-cartridge, i-regulator, i-diverter. Futhi, sihlinzeka nge-customized ceramic seal disc ngamapompo amanzi, amadivaysi okulawula ezokwelapha, nezimboni zokulawula iziphazamisi zomoya. Kungani...
I-Custom 95 Alumina Ceramic Disc For Valve
Ukuze uhlangabezane nezidingo ezikhethekile zezobuchwepheshe, izicelo. Siyakwazi ukubhekana nezinhlobo ezihlukahlukene ze-alumina ceramic disc ye-custom valve. Lezi zinhlaka ze-alumina ceramic zifakwe ikakhulukazi ku-valve yokushisa yokushisa, i-valve yokuguqula, i-valve yokumisa yokugezela ne-massage, ibhulogi...